फाइबरको महत्व | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » पोषण » फाइबरको महत्व 15
फाइबरको महत्व - जया प्रधान,
वनस्पती स्रोतबाट प्राप्त हुने रेसायुक्त पदार्थलाई फाइबर भनिन्छ । अन्नको पुरै भाग (मकै, गहुँ, जौ, फापर, कोदो), गेडागुडी (चना, केराउ, मस्याङ), सागपात, फलफूल आदिमा फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । साधारतया फाइबरले पाचनक्रियालाई स्वस्थ राख्न मद्धत गर्छ । यो कार्बोहाइड्रेटको एक प्रकार हो र यो पोलिस्याकराइड अन्तर्गत पर्छ ।
खानामा फाइबरको विशेष महत्व छ । यसको पाचन तथा शोषण शरीरभित्र नभए तापनि यसलाई खानाको रुपमा लिइन्छ । हुन त एक ग्राम कार्बोहाइड्रेटबाट ४ क्यालोरी शक्ति प्राप्त हुन्छ । फाइबर शरीरभित्र पाचन नै नभईकन बाहिर निस्कने भएकोले यो कार्बोहाइड्रेटको एक प्रकार भएपनि यसबाट शक्ति पाउन सकिँदैन । त्यसकारण साधारण अवस्थाबाहेक कम क्यालोरी भएको भोजनको योजना गर्दा फाइबर भएको खाद्यवस्तु समावेश गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।
भोजनमा समावेश गरिएको फाइबरले शक्ति दिँदैन, खाली यसले भोजनको परिमाण मात्र बढाँउछ । तौल घटाउन र मधुमेहजस्ता कम क्यालोरी आवश्यक पर्ने अवस्थामा फाइबर बढी भएको खाना समावेश गरिन्छ, किनकि यस्तो खानाले पेटचाँहि भरिन्छ तर क्यालोरी भने कम मात्र दिन्छ ।
शरीरमा यसको पाचन नहुने भएपनि यसले पाचन क्रियामा भने मद्दत पु¥याउँछ । खानाको पाचनक्रियाको क्रममा आन्द्रामा गतिशीलता ल्याउनमा मसिनोभन्दा खस्रो खानाको महत्व हुन्छ । किनकि पाचनक्रिया भइसकेपछि पनि खानामा रहेको फाइबरचाँहि नपचेर दिसाको रुपमा परिणत हुन्छ । दिसामा खस्रो पदार्थ बढी हुने भएकाले आन्द्राको यताउति नअड्की सजिलैसँग बाहिर निस्कन्छ, अर्थात फाइबर भएको खानाले कब्जियत हुनबाट बचाउँछ ।
खाद्यपदार्थमा भएको फाइबर शक्ति नदिने तत्वको रुपमा मात्र परिचित नभई यसले शरीरमा शक्ति उत्पादन गर्नमा समेत रोक्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि गरिएको छ । यदि फाइबर भएको खाद्यवस्तुसँगै चिल्लो र प्रोटिन पनि रहेको छ भने फाइबरले यी पौष्टिक तत्वहरुको पाचनसमेत कम गराउँछ । जब थोरै चिल्लो र प्रोटिनको पाचन हुन्छ तब रगतमा पनि यी तत्वहरुको मात्रा कम हुन्छ । पाचन नभएको बाँकी भाग शरीरबाट काम नलाग्ने पदार्थ अर्थात दिसा पिसाबको रुपमा बाहिर फ्याँकिन्छ ।
यूएसए हुमन न्युट्रेसन रिसर्च सेन्टर, मेरिल्यान्डले गरेको अध्ययनअनुसार शरीरमा क्यालोरी सन्तुलित राख्न र क्यालोरीको मात्रा कम गर्न व्यक्तिको भोजनमा १८ ग्रामको सट्टा ३६ ग्राम फाइबरयुक्त खाद्यपदार्थ समावेश गरेमा प्रतिदिन १३० क्यालोरी कटौती हुने कुरा पुष्टि भएको छ । यसैगरी २००० क्यालोरी दिने चिल्लो भएको कम पोषिलो भोजनभन्दा त्यति नै क्यालोरी दिने पोषिलो र बढी फाइबर भएको फलफूल, सागपात तथा पुरै अन्न समावेश भएको भोजनले व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्नुको साथै विभिन्न रोगको सम्भावनालाई पनि कम गर्छ ।
यसैगरी पानीमा नघोलिने फाइबर जस्तै अन्न, सागपात, फलफुल (बोक्रासमेत खानहुने फलफुल)मा पाइने फाइबरले पाचनअंगलाई गतिशील गराई त्यस ठाँउबाट खानालाई छिट्टै पास गराउँछ । यस किसिमको फाइबरले केही केही प्रकारको क्यान्सरको खतरा विशेषतः ठूलो आन्द्राको क्यान्सरलाई कम गर्छ । कोदो, फापर, सुकेको गेडागुडी, कोसा, फलफूल, सागपात आदिमा पाइने पानीमा घोलिने फाइबरले पेटमा खानाको शोषण क्रियालाई कम गर्छ तर पेट भरेको भान गराउँछ ।
यसले रगतमा कोलेस्टेरोल कम गर्न र रगतमा चिनीको मात्रालाई पनि सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ । त्यसकारण मधुमेह भएका व्यक्तिहरुको लागि पानीमा घोलिने फाइबर बढी उपयुक्त हुन्छ । केही खाद्यवस्तुहरु जस्तै स्याउ, केरामा दुवै प्रकारका फाइबर हुनछन् । यस प्रकार भोजनमा आवश्यक मात्रामा फाइबरयुक्त खाद्यवस्तु समावेश गर्न सकेमा क्यालोरी कटौती गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक साधारण व्यक्तिहरुको पाचन क्रियामा समेत मद्दत गर्ने हुँदा यसको स्वास्थ्य र पौष्टिक दृष्टिकोणले बेग्लै महत्व रहन गएको छ ।
प्रशस्त फाइबर भएको खाद्यवस्तुको उचित छनोट गरी मिलाएर बनाएको सलाद फाइबरको राम्रो स्रोत मानिन्छ । साधारणतया काँचै खान हुने फलफूल, सागपात, केही उमाल्न पर्ने खाद्यवस्तुहरु जस्तै केराउ, सिमी, चना आदिको मिश्रणबाट सलाद तयार गरिन्छ । एक साधारण व्यक्तिको दैनिक भोजनमा करिब ३० ग्राम फाइबरको आवश्यक पर्छ ।
प्रायजसो नेपालीहरुको भोजनमा कार्बोहाइड्रेटको प्रधान्यता रहे पनि कार्बोहाइड्रेटको नै एक प्रकार फाइबरको समावेश भोजनमा ज्यादै कम देखिन्छ । आर्थिक अवस्थाको कारणले विविध खाद्यवस्तुको छनोट गरी भोजनमा समावेश गर्न असमर्थ हुने र यसको महत्वबारे अनभिज्ञ हुनाले पनि फाइबरको प्रयोगमा कमी आएको देखिन्छ । फाइबरयुक्त खाद्यवस्तुहरु सकेसम्म काँचो अथवा साधारण तरिकाबाट कम चिल्लोको प्रयोग गरी बनाएमा बढी उपयुक्त हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ सलाद बनाउँदा यसमा डे«सिङको लागि प्रयोग गरेका पदार्थहरुले अप्रत्यक्षरुपमा क्यालोरीको मात्रा बढाइरहेको हुन्छ । प्रायजसो सलादमा ड्रेसिङको लागि मायोनाइज उमालेर काटेको अण्डाको टुक्रा, चीजको टुक्रा, तेलजस्ता चिल्लो बढी भएको पदार्थले क्यालोरीको मात्रा बढाउन सकिन्छ । १ चम्चा चिल्लोले करिब ८० देखि १०० क्यालोरी बढाउँछ । त्यसकारण सलाद बनाउँदा त्यसमा प्रयोग गरिने खाद्यवस्तुको उचित छनोट गर्नुको साथै सलादलाई उपयुक्त तवरले ड्रेसिङ गर्न पनि जरुरत पर्छ ।
दैनिक भोजनमा कति फाइबर आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा उमेर, लिंगमा भर पर्छ । साधारणतया २० देखि ४० ग्राम फाइबर प्रतिदिन आवश्यक हुन्छ । जसरी पुरुषको लागि कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन बढी आवश्यक हुन्छ त्यसरी नै फाइबर पनि महिलाको लागि भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । पुरुषको लागि ३८ ग्राम प्रतिदिन आवश्यक हुन्छ भने महिलाको लागि २५ ग्राम भए पुग्छ । यसैगरी उमेर बढ्दै जाने क्रममा ठूलो आन्द्रामा भएको नरम र चिप्लो मांसपेशीको खुम्चिने क्रिया कम हुँदै जाने हुँदा कब्जियतको समस्या हुने भएकोले यस्तो स्थितिमा भोजनमा फाइबरको परिमाण बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
भोजनमा फाइबर बढाउने उपाय
ब्रोकाउली, गाजर, कोसा, सलादको पात, जिरीको सागजस्ता काँचै खान हुने सागपात प्रशस्त मात्रामा भोजनमा समावेश गर्नुपर्छ ।
फलफूलको जुस, टिनको फलफूल तथा बोक्रा ताछेर खानुभन्दा नताछीकन ताजा फलफूल खानुपर्छ ।
चोकर निकालेको अन्नको सट्टा चोकरसहितको अन्न प्रयोग गर्नुपर्छ ।
हप्ताको २ वा ३ पटक विभिन्न प्रकारका गेडागुडी मिलाएर सुप तथा सलाद खानुपर्छ ।
कुनैपनि तरकारी वा सागपातको खान हुने बाहिरी भाग तथा बीयाँ छ भने खानामा त्यसको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
उमालेको आलु नताछिकन र काँक्रोको बीयाँ ननिकालीकन खानुपर्छ ।
धेरै फाइबरले ल्याउने समस्या
प्रतिदिन आवश्यकभन्दा बढी फाइबर उपभोग गर्नाले अर्थात ६० ग्राम प्रतिदिन खानाले स्वास्थ्यसमस्या सृजना गर्न सक्छ । बढी फाइबरयुक्त खाना खाँदा सोही परिमाणमा पानी पिउनुपर्ने हुन्छ । प्रशस्त मात्रामा पानी नलिएमा दिसा कसिएर कब्जियतको समस्या हुन सक्छ । बढी परिमाणमा फाइबर लिनाले यसमा एक प्रकारको तत्व हुन्छ जसेले जिंक र लौहतत्वजस्ता खनिज पदार्थलाई बाँधेर शोषण र उपयोगी हुनबाट रोक्छ । यसैगरी धेरै परिमाणमा फाइबरयुक्त खाना लिनाले ग्यास उत्पन्न हुनुको साथै पेटमा एक प्रकारको फाइबर बल बन्न सक्छ, जसलाई फाइटोबेजरर्स भनिन्छ । विशेषगरी मुधुमेह रोगी र वृद्धहरुमा यो पाइन्छ । किनकि यस अवस्थामा बढी फाइबरयुक्त खाना खाइन्छ । फाइबरयुक्त खानाले भोजनको परिमाण बढाउने भएकोले कहिलेकाहीँ अन्य पौष्टिक तत्वको अभाव पनि हुन सक्छ ।
- स्वास्थ्य खबरपत्रिका, २०६८ चैत अंक
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Recent Posts	जनस्वास्थ्य प्रमुख माथि लगाईएको यौन दुव्र्यवहारको आरोप झुटो सावीत
विश्व स्वास्थ्य सभामा फलदायी सहयोगको आग्रह
स्वास्थ्यकर्मी संघको अध्यक्षमा घिमिरे, महासचिवमा मुडभरी
जीवन अमूल्य छ, लापरबाही नगरौं …………….. किनकि ?
Homepageहेर, डाक्टरी विद्यार्थीको विजोग !डाक्टर साहेब, कहाँ गयो इथिक्स ?लापरवाहि गर्ने चिकित्सकलाई अदालतको कारवाहिकाउन्सिलमा पास विशेषज्ञ डाक्टरको नामावलीबिरामीको ब्यापार गर्न पाइँदैनडा. कोइरालाको राजीनामाको थप रहस्यहेल्थ अवार्डन्याम्सको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिकस्वास्थ्यले असमानता बढाएको छ : गगन थापा